Mbelata ụgbọ agbatụrụ oge ezumike a: Atụmatụ 8 iji metụta Ahịa | Martech Zone
Emechara m lelee a video nke onye njikwa Target na-eguzo n'elu ebe ndenye ọpụpụ ya, na-agwa ndị ọrụ ya okwu na-akpali akpali tupu ọ mepee ụzọ maka ndị ahịa Black Friday, na-achịkọta ndị agha ya dị ka a ga - asị na ọ na - akwadebe ha maka agha.
Na 2016, nsogbu ahụ bụ Black Friday buru ibu karịa mgbe ọ bụla. Ọ bụ ezie na ndị na-azụ ahịa nọrọ na nkezi $ 10 ihe na-erughị ka ha mere n'afọ gara aga, e nwere nde mmadụ atọ ndị ọzọ na-ere ahịa Black Friday na 2016 karịa na 2015, na-anya ụgbọ ala $ 3.34bn (ịrị elu nke 33%) na ahịa.
Agbanyeghị, jiri obi ebere maka ndị ọrụ ahụ bụ ndị kwesiri ịkwado onwe ha maka mwakpo ahụ, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-azụ ahịa họọrọ ịzụta n'ịntanetị, karịa na brik na ụlọ ahịa ngwa agha. Na 2015, ụfọdụ nde mmadụ 103 zụtara n'ịntanetị n'oge Black Friday, ma e jiri ya tụnyere nde 102 dị na ụlọ ahịa. N'afọ a, ngbanwe a abụrụla nke a ma ama karị, yana ihe karịrị nde ndị na-azụ ihe karịrị nde 108 na-azụ ihe n'ịntanetị, nde mmadụ 99.1 na-akwụ ụgwọ ndị ahụ n'otu n'otu dị ka NRF.
Karịsịa, mkpanaka apụtawo dị ka onye mmeri nke Black Friday 2016, na ndị na-ere ahịa gụnyere Amazon, Walmart, na Target na-ekwupụta ụbọchị ha kachasị ahịa maka okporo ụzọ mkpanaka. Ọbụna tupu Friday agafee, ndị na-ere ahịa gwara ha ndekọ $ 771 na ego si n'aka # mobile ngwaọrụ
Kasị mma, ọnụego mgbanwe na-akọ na-enwe nke 16.5% ebe ọ bụ na 2015, na ụgbọ ibu gbalaga na udu idobe site 3%. Ọ bụ ezie na ị nwere ike iche na nke a bụ ihe mere ị ga-eji chụpụ Prosecco ma kelee onwe gị na ọrụ ị rụzuru nke ọma, achọrọ ụfọdụ echiche: na 2016, ndị na-ere ahịa ka tufuru 69% nke ndị na-ere ahịa Black Friday na-ahapụ ịzụrụ ihe.
Ọ dịghị nzukọ na-enwe mmasị ịhapụ ego na tebụl, ma na-achọ ịghaghachi ya na-agba ọsọ megide oge - ka emechara, ọ bụghị ọtụtụ ndị ahịa nwere ike ịga n'ihu ịzụta oke ọnụ ozugbo Black Friday gafere. Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime ihe nkwụnye ego maka ego anaghị adị na nke a. N'iburu nke ahụ n'uche, lee aro ole na ole iji bịakwute mgbake ụgbọ ala n'oge ezumike a.
Mara ihe: Ezigbo ngwa ahia ngwanrọ kwesiri ibido. Site na teknụzụ a, nke a na - enye gị ohere iwulite ozi ịntanetị na 'smart blocks' - ngalaba nke ọdịnaya ahaziri iche nke na-enye gị ohere itinye ọkọlọtọ, ngụkọta oge, ndụmọdụ ọdịnala na ihe akaebe mmekọrịta mmadụ na ibe gị maka ozi mgbake.
Real-oge nsuso: Na oge bụ ihe kacha mkpa, inwe ike inyocha ụgbọ ịnyịnya ka ọ na-eme dị oke mkpa. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ụzọ nwere ike iwe obere oge iji mee ka ị mata maka mgbahapụ (na-eche oge maka oge, dịka ọmụmaatụ), jiri sọftụwia nwere ike ịchụso ịgbahapụ ozugbo, na-ebute ozugbo nnabata email nwere ọdịnaya nke nkata ha.
Mee ka nloghachi ha di nfe: Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka onye ahịa ahụ laghachite, mee ka ọ dịrị ha mfe. Ihe dị n'ime ụgbọ ha, nke zuru oke na ihe na-akpali akpali nke ngwaahịa ha, na-agwaghị ya, yabụ, ọ bụrụ na a ga-enwe ọkpụkpọ oku a ma ama nke ga-eme ka ha laghachi azụ na njem ndị ahịa iji bulie ebe ha kwụsịrị.
Mee ya nkeonwe: Ihe ncheta dị nro nke ekele onwe onye na / ma ọ bụ nkwanye ahaziri iche iji zuo ezu ụgbọ ala ha nwere ike ọ bụghị naanị ịnwa ha ọnwụnwa kamakwa gbaa ume ịzụrụ ihe.
Mepụta echiche nke ịdị ngwa: Ọ bụrụ na echiche nke ọtụtụ nde ndị ọzọ na-azụ ahịa n'otu oge na-achọ ọnụahịa ezughị iji kpalie ịzụta, mgbake mgbake na-egosiputa ọkwa ngwaahịa gị ugbu a nwere ike ime ka ụlọ ahụ dị adị.
Chetara ha ihe mere ha ji atọ ụtọ: Ndi onye na-azụ ahịa ahụ nwere echiche nke abụọ? Mee ka mkpebi ha dị mma nke ndị ahịa ma ọ bụ nyocha ndị ọrụ jiri ike kwado ha.
Mee ka ndụ ha dịkwuo mfe: A na-ekwupụtakarị ebubo nnyefe a na-atụghị anya ya dị ka ihe kpatara mgbahapụ ụgbọ - oke ụgwọ ụgwọ akwụkwọ ozi nwere ike ịkwụsị ezumike Ezumike site na ịba ụba ahịa. N'agbanyeghị nke ahụ, ozi mgbake ụgbọ ala bụ ohere dị mma iji chetara ndị na-azụ ahịa ihe ọ bụla ịpị & ịnakọta ma ọ bụ nhọrọ nnyefe ndị ọzọ ị na-enye.
Wepụ obi abụọ ọ bụla: Na ohere iji chekwaa ego, ọnwụnwa nke mkpali ga-adị elu karịa ka ọ dị na mbụ. Agbanyeghị, enweghị isi nwere ike ibuga ịkwa ụta na ịhapụ ya tupu ịzụta. Nyeghachi mmesi obi ike na ozi mgbake nke gosipụtara amụma nlọghachi gị, ego ọ bụla kwenyere na ị ga-enye ma ọ bụrụ na ịnyefee n'efu.
Site n'echiche onye na-eri ihe, ọ dị mfe ịghọta ụfọdụ ihe kpatara ha nwere ike iji gbalite azụ ahịa. Ka oge na-aga (na ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa) megide ha, mkpa ọ dị maka usoro ndenye ọpụpụ dị mfe, ngwa ngwa na enweghị ntụpọ dị mkpa. Maka saịtị ndị ahụ chọrọ koodu Black Friday pụrụ iche, inwe ike itinye ngwa ngwa wee hụ nsonaazụ ego (yana ụgwọ nnyefe) tupu ị rute ụgwọ ịkwụ ụgwọ nwere ike ịme ma ọ bụ mebie ntụgharị.
Ọzọkwa, ọ bụ mkpa maka usoro ndebanye aha. Ebe ọ bụ na ndị ahịa nwere ike ịga na saịtị ha na-enweghị tupu, enweghị 'ndenye ọpụpụ ọbịa', ma ọ bụ ihu ogologo oge iji mejupụta tupu ị gbalịsie ike ijide MacBook Pro ikpeazụ ahụ na-emepụta nnukwu ihe mgbochi.
Site na usoro ndenye ọpụpụ nke edogoro wee mee ka ọ ghara inwe nrụgide na desktọọpụ, mbadamba ma ọ bụ mkpanaka, nke zuru ezu na nnabata mgbatị zuru oke, ị ka nwere oge iji metụta ahịa tupu afọ apụ.
Tags: 2016nwa ogeojii ndị ahịa Fraịdeacha anụnụ anụnụbrik na ngwa aghaịzụ ihe n'ịntanetịproseccoJeriko
Waze Mpaghara: Ka ndị ọkwọ ụgbọala Waze hụ azụmahịa gị mgbe ha gbara gburugburu